Akhriso Baaq iyo Talooyin Muhiim ah oo laga soo saaray Khilaafka ka dhashay Mooshinka Jawaari. – Xeernews24
Akhriso Baaq iyo Talooyin Muhiim ah oo laga soo saaray Khilaafka ka dhashay Mooshinka Jawaari.
25. März 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Xildhibaanada Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray baaq iyo talooyin ku wajahan Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ku kala qeyb samay mooshinka laga keenay Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Qoraalka kasoo baxay Xildhibaanada Aqalka sare ayaa loogu baaqay Xildhibaanada Golaha Shacabka in ay u midoobaan gudashada waajibaadka dastuuriga ee maareynta Mooshinka horyaala .
Aqalka Sare qoraalka kasoo baxay ayaa lagu sheegay in aqbalaada Mooshinka Guddoomiye Jawaari laga soo bilaabayo 18 bishan Maarso, waxaana mudada mooshinkan uu ku barayo ay tahay mudo 10-cisho ah hadii aan Baarlamaanka la horgeyn.
Qoraalka kasoo baxay Xildhibaanada Aqalka sare ayaa lagu sheegay hadii aan Baarlamaanka la horgeyn mooshinkan ugu dambeyn 28-ka bisha ay u aqoonsan doonaan mooshinkaasi mid buray.
Halkan ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Aqalka sare
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/Qaranka-S.jpg 480 629 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-03-25 15:49:432018-03-25 15:49:43Akhriso Baaq iyo Talooyin Muhiim ah oo laga soo saaray Khilaafka ka dhashay Mooshinka Jawaari.
Shucuubta adduunka ugu wahsigga badan Qormo Xanuun badan oo ka sheegeyn dagaalkii dhex maray reer Boorama iyo jabhaddi...